Nnukwu Ọdịdị Elu Nchebe na Ụlọ Ọdịdị Style China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọ na-ebu ngwa ngwa,Ọnụ ọnụ siri ike ngwa ngwa,Ụlọ Ọrụ Mmebe Ụlọ Ọrụ
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ọdịdị Aluminom Elu Elu Ọnụ Ụzọ > Nnukwu Ọdịdị Elu Nchebe na Ụlọ Ọdịdị Style
Nnukwu Ọdịdị Elu Nchebe na Ụlọ Ọdịdị Style
Ihe Nlereanya.: HF-HSSD100
Certification: UL, TUV, CB, CCC, ISO9001, RoHS, CE
Nkwakọ ngwaahịa: Ụkpụrụ Plywood na-ebupụ Poker
Ọnụ ụzọ ọsọ ngwa ngwa a na-ejikarị eme ihe maka ebe ndị na-ebudata ebe niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Ejiri ya na ụzọ awara awara, a na-emeghe ọnụ ụzọ ndị a na-emeghe ihu na ebe ndị ụlọ na-ebelata. Ha na-enye okpomọkụ na mkpuchi mkpuchi ya na usoro ihe owuwu ya.
Usoro ntinye aka na USB na-enye nwayọ na-aga n'ihu n'ihu ọrụ maka ụzọ nrịba ama. Eji ọrụ mmanye dị maka ngwa buru ibu nke nwere ike itinye ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ na-ahụ maka ọrụ iji kwado ihe niile chọrọ.
A na-emepụta panel na-esi n'èzí site na 0,5mm, akwa mkpuchi zinc dị elu na BS EN 10147
Maka ihu igwe kachasị mma na-ekpuchi oghere ọnụ ụzọ nke nwere ngwongwo na-ejikọta ọnụ na-ejikọta akara dị elu nke ogologo nke panel ahụ.
A na-esinye usoro nlezigharị n'ime oghere nke ụlọ ahụ iji hụ na arụmọrụ na-arụghị ọrụ.
Na counterbalance gụnyere nke isi iyi ndokwasa na a nchara shaft na-akwa trasile helical ọnya nchara. Emeela ya ọkụ maka arụmọrụ ka mma maka gburugburu 50,000 cycles.
2018 Nnukwu ụlọ na-arụ ọrụ ụlọ na-adọkpụ ngwa ngwa
Ọnụ ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ na-enye ọrụ ọsọ ọsọ maka ọnọdụ dị elu na okporo ụzọ na ịkwanyere ugbo ala nke na-ekpochapụ mkpa maka ụzọ nchebe nke abụọ. Ngwurugwu Crisp na-enye ụzọ ikuku ahụ nke ọma nke dị oke mma maka ọtụtụ ụdị azụmahịa, ụlọ ahịa ụgbọala, ọchịchị, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Usoro ahụ dị mma maka ndị na-ere ahịa ụgbọala, gọọmentị, ebe ụgbọala na nchebe.
Nkebi: Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu
1. Oghere ọnụ ụzọ: Aluminom na PU foaming
2. Nwee mkpuchi: 40 mm
3. Aluminom ọkpụrụkpụ: 0,5 mm
4. Nhọrọ agba: Silver / Gold ọla / Green / Red
5. Ọsọ ọsọ: 0.8 - 1.5 M / S
6. Ọgba ọsọ: 0.6 - 1.0 M / S
7. Akụkụ nke okporo ụzọ: 2.0mm oké oyi-mpịakọta akwụkwọ mpempe akwụkwọ (Bao Steel) / 2.0mm oké igwe anaghị agba nchara
8. Mkpuchi igbe igbe: 1.0mm oké oyi-roll metal shett (Bao Steel) / 1.0mm thick stainless steel
9. Mgba ígwè: SEW / SIEMENS
10. Ike ụgbọ ala: 550W / 750W / 1500W / 2200W / 4000W
11. Igbe nchịkwa: SIEMENS / MITSUBISHI
12. Ọrụ nchebe: Airbag / Photo cell
13. Usoro nchịkwa nhọrọ: Geomagnetic right, Radar, Switching wire wire, Mkpanaka mkpọchi, eriri eriri, wdg.
Aluminom ndị China na-agba ọsọ ọsọ
N'ihe karịrị afọ asatọ
A na-ebupụ ya gaa n'ọtụtụ mba esenidụt
Na - arụkọ ọrụ na anyị - Nhọrọ amamihe gị.
Nchekwa ga-adị ọcha
Ụlọ ụlọ dị mkpa ka ọ ghara ịdị na ájá
Ụlọ ọrụ maka ngwaahịa ọgwụ
Ụlọ ọrụ maka nri
Ụlọ ọrụ maka akụkụ akụrụngwa
Ụlọ ọrụ maka Nchekwa ikike
1. Gịnị bụ nkọwa ego?
Deposit tupu mmepụta, na nhazi tupu mbupu.
2. Gịnị bụ oge nnyefe?
Maka usoro nkịtị, ihe dịka ụbọchị 7 naanị.
3. Gini banyere akwụkwọ ikike maka ibo ụzọ?
Anyị na-enye akwụkwọ ikike iri na abụọ maka ọnụ ụzọ na ngwa niile. Mgbe àgwà ngwaahịa ahụ pụtara.
4. Ị na-enye ọrụ OEM?
Ee. OEM & ODM Service dị mma maka anyị.
5. Gịnị bụ MOQ?
Anyị na-anabata 1 setịpụrụ dịka ntụziaka nlele.
6. Olee maka ngwugwu ahụ?
Ihe Plywood ma ọ bụ kaadiboodu, kwesịrị ekwesị maka ibu ụgbọ mmiri ma ọ bụ ibu ụgbọ elu, dị ka arịrịọ gị.
Ngwaahịa : Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ọdịdị Aluminom Elu Elu Ọnụ Ụzọ
Okpukpo Ulo Okpukpo Ugbo Turbine Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ụzọ Ámá Ọdịdị Dị Elu nke Aluminom Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị elu Kpọtụrụ ugbu a
Okpokoro Akpaka Akpaka Akpanaka Kpọtụrụ ugbu a
Akpa Turbo High Speed ​​Roller Shutter Spiral Door Kpọtụrụ ugbu a
Akpanaka Akụrụngwa Turbine siri ike Rolling Shutter n'Ọnụ Ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Doorzọ mpịakọta na-agba agba na ọsọ ọsọ Kpọtụrụ ugbu a
Ọgbọ ọhụrụ na-agba ọsọ ọsọ Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ na-ebu ngwa ngwa Ọnụ ọnụ siri ike ngwa ngwa Ụlọ Ọrụ Mmebe Ụlọ Ọrụ Ụlọ elu ngwa ngwa ngwa Ọnụ na-eme ngwa ngwa Ọdọ Ngwa ngwa ngwa Ụlọ elu ngwa ngwa ngwa ngwa Elu ụlọ ngwa ngwa